Azia Atsimo · Jolay, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Jolay, 2019
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Jolay, 2019
Periodismo de Barrio: Mitondra fiovàna ho an'ny Media Kiobàna
Sri Lanka 30 Jolay 2019
"Faly aho fa anananay ny olona misafidy ny hijanona an-tanindrazana fa tsy mandeha mandao ny firenena toy ny nataon-dry zareo tany aloha."
Niteraka fihetsiketsehana sy adihevitra ny fandraràna posiposy amin'ny làlan-dehibe any Dhaka, Bangladesh
Bangladesh 25 Jolay 2019
Nahitana hetsi-panoherana mahery vaika avy amin'ireo mpitarika posy sy ireo mpisera aterineto sasany izay mampiasa ity fitaovam-pitaterana mahazatra ity ny fandraràna ny posiposy amin'ny lalan-dehibe telo ao Dhaka.
An-tsary: Mikarakara matso iray i Nepal mandritra ny volana natokana erantany ho an'ny fireharehana (pelaka)
Nepal 24 Jolay 2019
Notakian'ireo mpandray anjara hanànana zo mitovy, anisan'izany ny fanambadiana eo amin'ireo olona mitovy fananahana ary vitan'izy ireo ny nampianatra ny olona momba ireo vondrom-piarahamonina 'pelaka samihafa, lavitry ny fampiasana ny teny mahazatra LGBTQ+.
Mampiseho ny fanaovan’ny governemanta antsirambina ny toeram-bakoka any Bangladesh ny fandravana ny tranobe tranainy efa 150 taona
Bangladesh 12 Jolay 2019
"Nanana endrika niavaka izay tsy fahita firy amin’ireo tranobe hafa hita any amin’ireo faritra tranainy ao Dhaka ny tranobe. Noho izany, nilaina ny fanarenana azy."
Milalao tsy araka ny fanjakazakan-dehilahy: maka ny ‘toerana natokana ho an'ny lehilahy’ ny tovovavy Miozolomana tamin'ny filalaovam-baolina
India 09 Jolay 2019
Raha maro ny olona no mihevitra fa hevitra nofinofy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fanatanjahantena dia nisy ny hetsika mihamitombo izay nahitana ny vahoaka niroso tamin'ny firesahana sy ny famahana ny olana momba ny fanjakazakan-dehilahy.